Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Dirty Pretty Things (England)
Dirty Pretty Things (England)
Okwe,akind-hearted Nigerian doctor, and Senay,aTurkish chambermaid, work at the same West London hotel. The hotel is run by Senor Sneaky and is the sort of place where dirty business like drug dealing and prostitution takes place. However, when Okwe findsahuman heart in one of the toilets, he uncovers something far more sinister than justacommon crime. Written by Sujit R. Varma
ဒီရုပ်ရှင်မှာ တခြားနိုင်ငံက တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ လူတွေကို သတင်းတွေမှာ အပြင်မှာ မကောင်းရေးတာ ပြောတာနဲ့ဆန့် ကျင်ပြီး ပြထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တခြားနိုင်ငံကလာသမား (အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေက) ဆိုရင် ရောဂါတွေ သယ်လာတယ်လို့ စွပ်စွဲပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ကို နိုင်ငံခြားသားဆီက တရားမ၀င် ရယူတယ်လို့ ပြထားပါတယ်။ လန်ဒန် ဟော်တယ်တခုကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ထားတာပါ။
စာတမ်းထိုး (Subtitle) - မန်းဒရင်း (Mandrine)
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၂၀၀၂ (2002)
အမျိုးအစား (Gerne) - Drama